पर्वतका व्रेन ट्युमर पीडित पौडेललाई प्रवासी युवाहरुले गरे ८५ हजार वढी आर्थिक सहयोग ! – ebaglung.com
२०७६ जेष्ठ १५, बुधबार ०३:३०	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
निर्मल पौडेल पर्वत २०७६ जेठ १५ । आर्थिक अभावमा उपचारमा समस्या भएर काठमाडौको अन्नपुर्ण न्युरो अस्पतालको ३०९ वेडवामा छटपटाई रहेका व्रेन ट्युमर पीडित जगदिश पौडेललाई प्रवासी युवाहरुले आर्थिक सहयोग गरेका छन् । लिमिठाना घर भई वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा हाल दक्षिण कोरियामा रहेका युवाहरु मिलेर ८७ हजार ५ सय ८९ रुपैया सहयोग गरेका हुन् । उ
पचारमा अवाभ भएको समाचार थाह भएपछी विशेष गरि कोरिएमा रहेका सन्तोष रेग्मीको पहलमा अन्य प्रवासी दाजुभाईहरुले उक्त रकम संकलन गरि सहयोग गरेका हुन् । सहयोग गर्नेहरुमा सन्तोष रेग्मी, जगदिश सापकोटा,आनन्द तिवारी,विमल पन्त,लेख पन्त,माधव अशोक रेग्मी,पुरुषोत्तम तिमिल्सिना नरवहादुर भण्डारी, संकोच भण्डारी,शशी रेग्मी,विमल थापा,मोहन भुषाल गिरीजा सुनार,ध्रव भुषाल,प्रशान्त सिल्वाल र ठानामौलाका राज कुवँरले उक्त रकम सहयोग गरेका हुन् । उक्त रकम अशोक पौडेल मार्फत विरामी समक्ष पु¥याईएको सन्तोष रेग्मिले वताए ।
विरामी परेको समाचार देख्दा र सुन्दा आँसुनै आयो र थोरै भएपनि उपचारमा सहयोग होस भनेर लिमिठानामा जन्मेर कोरियामा रहने दाजुभाईहरुले आफुले सक्ने सहयोग संकलन गरेर पठाएको रेग्मीले वताए । रकम वुझ्दै पीडितका दाजु रमाकान्त पौडेलले दुखको घाउमा मल्हम लागाउने सम्पुर्ण सहयोगी मनहरु लाई धन्यवाद दिए ।
उपचारमा अहिले सम्म गाउँलेहरुले जम्मा गरेको र आफन्तहरुले जोडजाड पारेको ३ लाख खर्च भैसकेको छ । अझै करिव ५ लाख जति लाग्ने अस्पताल स्रोतले वताएको छ । पौडेल परिपवारमा अव माग्ने र हात थाप्ने ठाउँ अन्त कतै पनि छैन। विरामीको छेवैमा रहेकी श्रीमती विन्दुले भक्कानिएर रुँदै भनिन् “जिन्दगीमा यस्तो पनि हुने रहेछ, हामीलाई मात्र किन यस्तो हुन्छ? कृपया मेरो श्रीमान् लाई सहयोग गरेर वचाइदिनुहोस्, यहाँ लाई केही भैहाल्यौ भने म के गरुँला? यी साना छोराछोरी हरु गरुला वोली पुरा पनि गर्न सकिनन् ।”
शल्यकृया पश्चात पौडेल अर्धचेत अवस्थामा पल्टिरहेका छन् । घरीघरी होसमा आउँदा उनी भन्छन् “म वाँच्न चाहन्छु कोही मलाई वँचाई दिनुहोस् । ” यत्ति मात्र वोल्छन् । डाक्टरले धेरै वोल्न पनि नहुने वताएको छ ।१२ दिनअगाडी एक्कासी ढलेपछी वुटवलको अस्पतालमा लगेर उपचार गराउँदा व्रेन ट्युमर भएको थाह भएपछी थप उपचारको लागि काठमाण्डौ रिफर गरिएको हो ।
मानवियता दर्शाएर सहयोग गर्न इच्छुकले पीडितका दाजु रमाकान्त पौडेलको मोवाईल नम्वर ९८४७६४५६९४ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । जिन्दगीमा आपत सवैलाई पर्छ तपाईको सानो सहयोगले पौडेलले नयाँ जीवन पाउने छन् ।